Daawo Sawirrada: Melleteriga itoobiya oo 170 Qof Muslimiin Oromo Ah Ku Xasuuqay Magaalada Bishoftu.
Monday October 03, 2016 - 09:19:00 in Wararka by
Wadanka Itoobiya waxaa sii xogeystay kacdoonka shacbiga ah ee ka dhanka ah Taliska Tigreega magaalada Addis Ababa
Wakaaladaha wararka reer galbeedka iyo ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka Itoobiya ayaa sheegay in kumanaan katirsan ciidanka Booliska ee sida Melleteriga u tababaran ay weeraro isdaba joog ah ku qaadeen magaalooyin ay dibad baxyo ka dhigayeen dad katirsan muslimiinta Qowmiyadda Oromo.
Xasuuqa ugu daran ayaa la sheegay in ciidanka Xabashida ay kula kaceen dadka dibad baxyada dhigayay waxayna dhimashadu ku dhowdahay 200 oo ruux sida ay sheegeen kooxaha mucaraadka dibad joogga ah.
Wararka ka imaanaya duleedka Addis Ababa ayaa xaqiijinaya in shalay xasuuq daran uu ka bilaawday deegaanno kamid ah Gobalka Oromiya, ciidanka Itoobiya ayaa la sheegay in ay gaysteen Xasuuqii ugu ba’naa Abid tan iyo markii ay bilaawdeen kacdoonada shacbiga ah.
Jabhadda Tigreega TPLF ee xukunka haysta ayaa la sheegay in ay go'aamisay in si dedeg ah lagusoo afjaro kacdoonka waxayna bilaawday Olole melleteri oo lagu gubayo dhulalka muslimiinta Oromada.
Xasuuqan oo ay si wadajir ah u fulinnayaan Ciidamada dhulka Itoobiya gaar ahaan kuwa loo yaqaano Agazi iyo kuwa cirka ayaa waxay si xowlli ah uga socdaan Deegaanada Oromiya intooda badan.
Gummaadka ugu daran ayaa ka dhacay magaalada Bishoftu ama Debre-Ziet, dhimashada ayaa kor u dhaaftay 170 ruux, Warbaahinta reer galbeedka iyo Safaaradaha kuyaal magaalada Adiss -Ababa ayaa dusha ka eeganaya waxaa ka socda dhulka Oromiya, waxaana xusid mudan in reergalbeedku ay Afka furtaan markii ciidanka Itoobiya ay xasuuqayaan dadka Nasaarada Amxaarada balse marka Muslimiinta la xasuuqayo afka ayay ka qabsadaan.
Shalay tirada dadka la xasuuqay waxay gaartay 100 qof balse xalay oo idil ayay ciidanka Itoobiya gaysanayeen toogashooyin iyo gubidda guryo ay dadka muslimiinta ah leeyihiin.
Wararakii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in melleteriga Itoobiya ay jareen isgaarsiinta Taleefanada iyo Internetka dhammaan degmooyinka iyo deegaanka Oromiya ee xasuuqa bahalnimada ah uu ka socdo.
Isha Sawirrada: ONA
Weeraro Sawaariikh ah oo lagu qaaday Saldhigga Mareykanka ee magaalada Baqdaad.
Ciidamo Itoobiyaan baxsad ahaa oo lagu laayay gobolka Hiiraan.
85 Sano oo kasoo Wareegtay markii ay ciidamada dowladda Shiinaha qabsadeen dhulka Muslimiinta Turkistaanta Bari [Warbixin].
Warbixin+ Video: Habaarkii Muslimiinta miyaa sabab u ah Cudurka halista ah ee ka dilaacay dalka Shiina?